Dalxiiska Hindiya ayaa ka mahadceliyay gargaarka dowladda ee dhibaatada ba'an ee COVID-19
Bogga ugu weyn » Maqaallada Wararkii Ugu Dambeeyay » Jebinta Wararka Caalamka » Wararka Hindiya » Dalxiiska Hindiya ayaa ka mahadceliyay gargaarka dowladda ee dhibaatada ba'an ee COVID-19
Jebinta Wararka Caalamka • Wararka Dowladda • Warshadaha Warshadaha • Wararka Hindiya • Investments • News • Dib-u-dhiska • Dalxiiska • Hadalka Dalxiiska • Cusbooneysiinta Socdaalka Safarka • Sirta Safarka • Wararka kala duwan
Ururka ay ku bahoobeen dalxiisayaasha dalxiiska Hindiya (IATO) ayaa muujiyay mahadnaq ay u hayaan Hon. Ra'iisul Wasaaraha iyo Mudane. Wasiirka maaliyadda siinta xoogaa gargaar ah warshadaha dalxiiska oo ay ku jiraan 5 fiisooyin bilaash ah oo khuseeya illaa Maarso 31, 2022, markasta oo fiisooyinku furan yihiin.
Madaxweynaha IATO Mudane Rajiv Mehra wuxuu qiray taageerada Hon. Wasiirka Dalxiiska xilligan xasaasiga ah.
Waxaa sidoo kale hadalo ka jeediyay mudane. Wasiirka Maaliyada shir jaraa’id oo uu qabtay galabta, Juun 28, 2021.
Gargaarka la siiyay waaxda dalxiiska ee waxyeeladu soo gaadhay oo ay ku jiraan dabcan hawl wadeenada dalxiiska iyo hagayaal dalxiis oo diiwaangashan.
Mudane Mehra wuxuu xusay inuu ku rajo weyn yahay in fiisaha dalxiiska elektaroonigga ah dhawaan la furi doono, wuxuuna ka codsaday Mudane. Raiisel wasaare in dhamaan fiisooyinka mudo dhan 30 maalmood ay xor u ahaadaan dhamaan dadka dalbanaya fiisaha ilaa iyo 31-ka Maarso 2023.
Mudane Mehra ayaa sidoo kale u mahadceliyey dowlada tixgelinta amaahda ay siisay howl wadeenada dalxiiska iyo hagayaasha dalxiiska laakiin wuxuu codsaday in dowlada ay sidoo kale ka fiirsato in hal mar deeq lacageed la siiyo dhamaan howl wadeenada dalxiiska ee la aqoonsan yahay taas oo noqon karta boqolkiiba 50 mushaharka ay bixiyaan howlwadeenada dalxiis ee sanadka 2019 -20 iyo Rs. 2.5 lakh (US $ 298,163) oo lagu siinayo hage kasta oo dalxiis oo ay Wasaaradda Dalxiiska / Dowlad Goboleedku u aqoonsan tahay deeq hal mar ah.
Mudane Mehra wuxuu ku rajo weyn yahay in la sii daayo SEIS 2019-20 (Adeegga Dhoofinta Adeegga ee Hindisaha Hindiya) ee loogu talagalay hawlwadeennada dalxiisyada ee helaya sarrifka lacagaha qalaad ee waaxda adeegyada, taas oo sugaysa ku dhawaaqista dawladda, boqolkiiba waxaa loo qaadan karaa ugu yaraan 10 boqolkiiba shisheeyaha. Dakhliga isweydaarsiga si ay xoogaa taageero ah u siiso howl wadeenada dalxiiska si ay ugu noolaadaan una soo nooleeyaan ganacsigooda inta lagu jiro xaaladan cakiran iyo xubnahoodu inaysan ku dhamaan dhibanayaal badan oo COVID-19 ah oo taa badalkeeda aad oksijiin galisid meheraddooda oo aakhirka ku xidhin hawo-qaadeyaasha.
Warshadaha dalxiiska iyo dalxiiska ee Hindiya waxay sidoo kale u baahan yihiin taageero joogta ah oo ay ka helaan dowladda si ay u soo noolaato oo ay u sii xoogaysato mustaqbalka. Xiriirka Rugta Ganacsiga iyo Warshadaha Hindiya (FICC) Waxaan ku taliyay in dalxiiska Hindiya lagu daro liistada isla dastuurka si Xarunta iyo dowlad-goboleedyaduba u dejiyaan siyaasadaha dalxiiska ee koritaanka dalxiiska. Si loo soo nooleeyo dalxiiskii gudaha, dowladdu waa inay bixisaa canshuur celin illaa rupees 1.5 lakh ah oo loogu talagalay kharashaadka ciidaha guryaha ee safafka Gunnada Safarka ee Fasaxa (LTA).
Maanta Hindiya, muddadii u dhaxeysay Janaayo 3, 2020, ilaa 4:47 pm CEST, Juun 28, 2021, waxaa jirey 30,279,331 kiis oo la xaqiijiyey oo ah COVID-19 oo ay u dhinteen 396,730, sida lagu wargeliyey Ururka Caafimaadka Adduunka (WHO). Laga bilaabo Juun 19, 2021, wadar dhan 276,255,304 qaadasho tallaal ayaa la qaatay.